Local Government Archives – Page 49 of 52 – Kubatana.net
The Combined Harare Residents Association (CHRA) implores the Harare City Council to address the major drivers of typhoid and prevent needless loss of lives in the capital. CHRA is concerned…
ZIMBABWE Lawyers for Human Rights (ZLHR) notes with deep concern the pervasive practice by local authorities in engaging the services of debt collectors who have been issuing out threats of…
Vendors Initiative for Social and Economic Transformation (VISET) yesterday participated at a Policy Dialogue Forum on the Informal Sector in Zimbabwe that was held in Harare. The dialogue forum was…
Zimbabwe Government insists on ill-advised eviction of informal traders
By Zimbabwe Human Rights Association (Zimrights) | Economy, Local Government
THE Zimbabwean government this week deployed police to chase vendors out of the streets of Harare in an effort to move them to so-called designated areas. The anti-riot police who…
ZIMBABWEAN police on Tuesday 10 October 2017 arrested Stendrick Zvorwadza, a pro-democracy campaigner and charged him with undermining authority or insulting President Robert Mugabe. Zimbabwe Republic Police (ZRP) officers from…